Home Page COVID-19 – Schoolslọ akwụkwọ Mason City COVID-19 Isi
Dịka onye isi gị, Achọrọ m ka ị mara na anyị nọ ebe a iji kwado ma lekọta ọgbakọ anyị site na nkwukọrịta na-agbanwe agbanwe, akụrụngwa, na olile anya.
Ka anyị na-aga n’ihu ihe omume a siri ike, anyị ga-aga n’ihu ịkparịta ụka – ime ka ị mara ihe anyị ma, mgbe anyị mara ya. Biko pịa n'okpuru maka ozi anyị na-eme kwa ụbọchị.
Nọrọ na njikọ n'oge ihe omume COVID-19
Akụ Dị Mkpa
N’April 6, Anyị ga-agaghari na gburugburu ebe obibi mmụta. Mgbe ndị ọrụ anyị na-akwado maka mgbanwe a, ị ga-ahụ ọtụtụ ihe enyere aka maka nwa akwụkwọ gị.
Ebe Mmụta Ọmụmụ
Muta ihe ndi ozo banyere ulo akwukwo nke Mason City. Nweta usoro iji nagide oge a.
Chọpụta otu esi enweta Chromebook ma ọ bụrụ na nwa gị enweghị ngwaọrụ. Mụọ otu esi enweta nkwado maka izu ndị na-abịa.
Onweghi onye n’obodo anyi kwesiri iri agu. Chọpụta otu esi enweta nri, yana etu MCS si na akwado ndi ezinulo anyi no na nri.
Nke a bụ oge dị oke mkpa nye ọtụtụ ndị n’obodo anyị. Anyị ma na Comet CommUNITY anyị dị njikere inye aka mgbe niile. Chọta ụzọ isi kwado ezinụlọ, ulo oru (ọ kachasị ndị ọbịa) na ndị ọzọ chọrọ enyemaka anyị.
Lelee azịza ajụjụ ndị a na-ajụkarị gbasara ezinụlọ anyị na obodo anyị.
Aza Ajụjụ Corona Virus
Site na Hospitallọ Ọgwụ ụmụaka na Cincinnati
Ngwa oru ihe omumu ihe ndi ozo
Anyi no ebea ...
Ozi si n’isi ndị isi anyị
“N'oge ihe siri ike, Enwere m obi ike na ndị ọrụ anyị, ụmụ akwụkwọ na ndị obodo n'ihi nke anyị district 3 Nnukwu Oké Nkume. Anyị na-eche maka ụmụ akwụkwọ anyị na ezinụlọ anyị n’oge a, anyị chọrọ ka ị mata ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị ebe a maka gị ka anyị na-amalite njem ọhụrụ a.. Ezie na nke a bụ ihe ịma aka ọhụrụ, ndị ọrụ MHS na-enweta nnukwu nganga na "innọgide na Oge" na ịzaghachi ihe omume ndị a ka ụmụ akwụkwọ anyị niile na ezinụlọ anyị na-eto kwa ụbọchị ma na-aga n'ihu na-emezu Ọdịdị Agwuregwu anyị.
Bobby DoddMHS Onye isi
"Lee ngọzi ọ bụ na anyị anọwo na-arụ ọrụ na Omenala Comet anyị na nghọta anyị banyere E + R = O tupu ihe omume COVID-19 a bịara n'ụzọ anyị. Enwere m mmetụta nke ịbụ onye nwere ihe ndabara maka ịzaghachi ihe omume ọjọọ ahụ n'etiti ndị obodo Mason Comet anyị. "
Lauren GenteneOnye isi oche Mason Middle School
“Ndị ọrụ anyị, studentsmụ akwụkwọ na ndị obodo amụọla ka esi emegharị na imeghari n'ụgbọ elu ahụ n'izu abụọ gara aga. Ndị ọrụ na MI bụ “Inwe Oge” ma na-arụ ọrụ ka ha na ụmụ akwụkwọ jikọọ ma hazie atụmatụ ga-aga n'ihu mmụta. Ọ na-ewute anyị ịhụ ụmụ akwụkwọ anyị kwa ụbọchị mana anyị na-atụ anya ịme njem a ọnụ. Nwee ahụike ma nwee nsogbu! Nọrọ MI Sie Ike!"
Eric MesserOnye isi nchịkwa Mason
Ọ bụ ihe na-enye obi ụtọ ịhụ ngosipụta nke obiọma na olileanya site na ME Comets anyị. Anyị na-aga n'ihu ibi ndụ ebumnuche ụlọ akwụkwọ anyị, 'Obiọma bidoro na M.E.' site n'ịgakwuru ndị otu Comet Country ka mụ na ha jikọọ ma mee ka ha mata na anyị na-elekọta ha.. Ndị ọrụ Mason Elekere siri ike ịkwado ụmụ akwụkwọ na ezinụlọ anyị. ”
Javaris PowellIsi Mason Elementary
"Ọ dịtụbeghị mkpa karịa ibi ndụ akụrụngwa ụmụaka anyị na ịnọgidesi ike, mmetụta ọmịiko, ike mgbanwe, resili na nchekwube. Ezinụlọ anyị, ndị ọrụ na ụmụ akwụkwọ niile na-ekerịta akụkọ banyere otú ibi ndụ si emetụta ha na-agbanwe ndụ n'ezie n'oge a. Anyị ji obi anyị niile na Comet Kids na Mason Community!!"
Melissa BlyMason Early Child Center
Ilekọta ụmụ akwụkwọ na ezinụlọ anyị ...
Ma ọ bụ nri, ahụike uche na-akwado, teknụzụ, ma ọ bụ ihe mmụta - Anyi no ebe a maka obodo Mason na deerfield.